कोरोनासंग लड्न रोल्पामा सजकता अपनाउनु पर्नेमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सिजलको आग्रह – रोल्पा समाचार
२०७६ चैत्र २१, शुक्रबार १६:२७ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ चैत्र २१, शुक्रबार १६:२७ गते
चैत्र २१ राेल्पा
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय समिति सदस्य एवं रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज दिपेन्द्र कुमार पुनमगर (सिजल) ले शुक्रबार एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी संक्रमणले विश्वका सम्पूर्ण देशहरु आक्रान्त बनेका छन् । जनजीवनको सम्पूर्णक्षेत्रामा गम्भिर असर परिरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार पुनमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ः–‘। मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरु समेत पूरा गर्न क्रमशःआज गाह्रो पर्दै जान थालेको छ । यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरुलाई पालना गर्नु हामी सबै सचेत नेपाली नागरिकहरुको दायित्व भित्र पर्दछ । साथै आम नागरिकहरुको सचेतना पनि उत्तिकै जरुरी पर्दछ । यो रोगको संक्रमण शुरु भएयता कतिपय घटनाहरुमा सामान्य कमजोरीबाट उत्पन्न भएको समस्या आज हाम्रै अगाडि भयाबह हुँदै गइरहेको छ ।’
सुन भन्दा मानिससँग नुन र जनिम भन्दा मानिसहरुसंग अन्न हुनु पर्ने तर्क राख्दै पुनमगरले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा मानिसहरुलाई भोकमरीको समस्या र कोरोनाको संयुक्त समस्यालाई पार गर्न निकै कठिन हुने भन्दै सो विज्ञप्तीमा यसरी अहिले यो रोगले विश्वव्यापी रुपमा एउटा महामारीको रुप लिइसकेको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सकिएन भने यो संक्रमणसँग भोकमरी जस्तो अर्काे वयाबह समस्या जोडिएर आयो भने यो महामारी र भोकमरीको संकट कस्तो होला ? मानिससँग सुन छ, नून छैन जमिन छ, अन्न छैन त्यस्तो अबस्थाको मानवीय संकट कस्तो होला ? यो सिंगो मानव समुदायको भविस्यको सम्भावित चुनौती हो । यसलाई सचेतना पूर्वक समना गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो सामू अर्काे विकल्प छैन । यसको लागि तमाम प्रतिकुल परिस्थितिहरुलाई हाम्रो बाबुभित्र रहेको अवस्थामा सोच समयमै विचार पु¥याउनु पर्दछ । भनिएको छ ।
नेपालीहरु विभिन्न रोग तथा संकटसँग संघर्ष गर्दै आएकोले अझै कोरोना भाइरस विरुद्ध एक भएर अगाडि बढ्न समेत आह्वान गर्नुभएको छ । सो विज्ञप्तीमा निश्चित रुपले आजको प्रविधि र अबको प्रविधिले आजको समस्या र अबको समस्यालाई सामाधान गर्ने छ । विगतको मानवीय इतिहासमा थुर्पै मानवीय संकट पार गरेर आजको मानव अतित्व कायम भएको छ । नेपालमा कुष्ठरोग, दादुरा, हैजा, औलो इत्यादी जस्ता महामारी रोगहरु पार गरेर हामी आएका छौँ । यो कुरा कम्तिमा आजको पुस्तालाई जानकारी गराउनु पर्दछ । जसले गर्दा विगतको शिक्षा पाउन, वर्तमान र भविस्यमा अझ बढी सावधानी अपनाउन सकुन ।’
रोल्पा जिल्लामा लकडाउनको बेलामा रोल्पा जिल्लामा त्यस प्रकारको घटना नभएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । रोल्पा जिल्लाबाट प्रदेश सभा सदस्य समेत बन्नुभए दिपेन्द्र पुनमगरद्वारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ ः–‘हाम्रो रोल्पा जिल्लामा पनि विभिन्न देशबाट विशेष गरी छिमेकी मुलक भारतबाट अत्याधिक आउनु भएको छ । त्यसैगरी पेशा देशभित्रका विभिन्न शहर र स्थानहरुबाट पनि आउनु भएको छ । सबै महानुभावहरु निर्धारित समयसम्म सुरक्षित स्थानमा बसेर साथ दिनुभएको छ । कतिपय स्थानमा जानकारी नदिएर बस्ने, सोधखोज गर्दा प्रतिरोध गर्न खोज्ने, सामाजिक प्रतिस्थासँग जोड्ने, निर्धारित समय सकेपछि भोज भटेर गरेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ । अर्काे कुरा आफैले आफैलाई सुरक्षित घोषणा गर्ने व्यक्तिहरुको समस्या पनि देखिएको छ । यसको लागि सिंगो समाज, परिवार र व्यक्तिहरुको अनुशासित र जागरुक हुनुपर्द । कथमकडाचित कोही कसैले जानीबुझी अटेरी गरेमा नियम अनुसार कठोर कदम चाल्न समेत पछि पर्नु हुँदैन । यसको लागि समयमै समन्धित व्यक्तिहरुलाई सगज र सतर्क बनाउनु पर्दछ । अन्यथा एक दुई जनाको कमजोरीले सिंगो समाज भयावह हुन खतरा रहन्छ ।’
रोग रोग नै भएको बताउँदै पुनमगरले विज्ञप्ती मार्फत सबैलाई सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘अन्तमा रोग रोग नै हो । यसमा कुनै माया, ममता र भावनाको कुरा हुँदैन । त्यसैले हामी सबैले कठोरतापूर्वक नियमको पालना गर्नु गराउनु बाहेक अर्काे दोस्रो बाटो टैन । लकडाउन हाम्रो वाध्यतात्मक आवश्यकताको उपज हो । यसबाट हुन गएको क्षति आगामी सहज दिनहरुमा परिपूर्ति गर्ने नै छौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रोल्पा जिल्लाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो ठाउँमा खतिरहनुभएको छ र आगामी दिनहरुमा अझै चनाखो पूर्वक खट्नु हुनेछ । यतिखेर स्थानीय सरकारको प्रभाकारीताको बारेमा, औचित्यताको बारेमा बस्तुतःपुष्टि भएको छ । किनभने देश विदेशबाट आउँदा गाउँ÷नगर÷प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दै आई राख्नुभएको छ । उहाँहरुले यहाँ आएकाहरुलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गरि राख्नु भएको छ । यसमा रहेका अपुगताहरुलाई पहिचान गरेर निरन्तर लाग्नु हुने कुरामा हाम्रो पार्टी पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछ । ’
प्रदेस सभास सदस्य पुनमगरले सिमित साधान स्रोतका बावजुत हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरु २४ घण्टा खटिराख्नुमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै संघीय सरकार, प्रदेससरकार र स्थानीय सरकारले अपुग सुरक्षित सामग्री र औषधीहरु उपलब्ध गराई दिएर सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थित उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन तीनैतहका सरकार सँग जोडदार माग समेत गर्नुभकोको छ ।
सबैलाई कोरोना भाइरस सँग लड्नका लागि सामूहिक प्रयास नै पहिले भएकोले सबैले आफ्नो स्थानबाट अडिक भएर उभिएर सामूहिकता भावनाले सामान गर्न समेत अपिल गर्नुभएको छ ।
चौथो सामुदायिक वन दिवस रोल्पामा
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७६ श्रावण २५, शनिबार १२:५६ गते २०७६ श्रावण २५, शनिबार १३:४७ गते
चन्द्र रोकामगर साउन २५ रोल्पा लिबाङ–रोल्पा “सामुदायिक वनमा नविनतम् सोच, उत्पादन, उद्यम र समृद्धिमा जोड” भन्ने मुल नाराका साथ चौथो सामुदायिक...